राजेश हमाल संग लभ स्टोरी फिल्म खेल्न मन छ : नम्रता सापकोटा !
प्रकाशित मिति : June 9, 2019
राजेश दाइ मेरो ड्रिम हिरो भन्दा फरक पर्दैन । साडी हावामा उडाएर म पर्खिरहेको । उहाँ आएर अँगाल्दै गीत गाएको कल्पना अझै पनि गर्छु म ।
म बच्चादेखि नै राजेश हमालको फ्यान हुँ । उहाँले मेरो मनमस्तिष्कमा जुन ठाउँ ओगट्नु भएको छ, त्यो अहिले पनि उस्तै छ । सानैदेखि उहाँको फिल्म हेरेँ । उहाँको हाउभाउ र शारीरिक बनोटले मलाई जहिल्यै लोभ्याउँथ्यो । म फिल्म क्षेत्रमा नआउँदै उहाँ मेरो प्रिय हिरो हो ।
स्कुलमा साथीहरूसँग हामी राजेश हमालको कुरा गथ्र्यौँ । उहाँको कल्पना गथ्र्यौँ । मन परेको हिरो भएर होला उहाँका बारेमा सुनिरहँुजस्तो लाग्थ्यो । त्यसैले होला मलाई उहाँसँग काम गर्न अत्यन्तै मन छ ।
सायद मैले जीवनमा पहिलोपटक दिएको अन्तर्वार्तामा राजेश दाइको नै नाम लिएको थिएँ । फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएँ, तर उहाँसँग अहिलेसम्म कुनै फिल्म खेल्न पाएको छैन ।
केही वर्षअगाडि मलेसियामा एक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ । उहाँसँग भेट भयो । उहाँलाई देखेर म साह्रै नर्भस भएँ । अनि उहाँले मलाई बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई… बोलको गीतमा सँगै पर्फर्मेन्स देखाउनुपर्छ भन्नुभयो । म त साह्रै भावुक भएँ । त्यो खुसीले मलाई साह्रै आनन्द लाग्यो । बच्चैदेखिको फ्यानसँग राजेश दाइले नाचिदिन्छु भन्नुभयो ।
सकुन्तला फिल्ममा उहाँको लिड रोल थियो । त्यो फिल्मको एउटा आइटम गीतमा मलाई अफर आयो । हमाल दाइसँग फिल्म खेल्न पाउने भएँ भनेर मक्खै भएँ । कम्तीमा एउटा गीतमा भए पनि सँगै देखिन पाउने भएँ भनेर खुसीले गदगद भएँ । तर, आइटम गीतमा उहाँलाई समावेश नै गरिएन ।
हमाल दाइ मेरो ड्रिम हिरोभन्दा फरक पर्दैन । साडी हावामा उडाएर म पर्खिरहेको । उहाँ आएर अँगाल्दै गीत गाएको कल्पना अझै पनि गर्छु म । अहिले पनि उहाँसँग रोमान्टिक लभस्टोरी मूभिमा काम गर्ने मन छ । उहाँको हात समाएर रोमान्स गर्न रहर छ । कलाकार कहिल्यै बूढा हुँदैनन् भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले पनि उहाँ उस्तै लाग्छ । भगवान्ले उहाँसँग फिल्म खेल्ने जुराइदिएहुन्थ्यो नि ।राजेश दाइ मेरो ड्रिम हिरो भन्दा फरक पर्दैन । साडी हावामा उडाएर म पर्खिरहेको । उहाँ आएर अँगाल्दै गीत गाएको कल्पना अझै पनि गर्छु म ।
सायद मैले जीवनमा पहिलोपटक दिएको अन्तर्वार्तामा राजेश दाइको नै नाम लिएको थिएँ । फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएँ, तर उहाँसँग अहिलेसम्म कुनै फिल्म खेल्न पाएको छैन । केही वर्षअगाडि मलेसियामा एक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ । उहाँसँग भेट भयो । उहाँलाई देखेर म साह्रै नर्भस भएँ । अनि उहाँले मलाई बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई… बोलको गीतमा सँगै पर्फर्मेन्स देखाउनुपर्छ भन्नुभयो । म त साह्रै भावुक भएँ । त्यो खुसीले मलाई साह्रै आनन्द लाग्यो । बच्चैदेखिको फ्यानसँग राजेश दाइले नाचिदिन्छु भन्नुभयो ।
हमाल दाइ मेरो ड्रिम हिरोभन्दा फरक पर्दैन । साडी हावामा उडाएर म पर्खिरहेको । उहाँ आएर अँगाल्दै गीत गाएको कल्पना अझै पनि गर्छु म । अहिले पनि उहाँसँग रोमान्टिक लभस्टोरी मूभिमा काम गर्ने मन छ । उहाँको हात समाएर रोमान्स गर्न रहर छ । कलाकार कहिल्यै बूढा हुँदैनन् भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले पनि उहाँ उस्तै लाग्छ । भगवान्ले उहाँसँग फिल्म खेल्ने जुराइदिएहुन्थ्यो नि । स्रोत: नयाँ पत्रीका दैनिक ।
* आफ्नै ठुलीआमाले गरिन छोरीको बलात्कार !
नेपाली आहान नै छ, सौताको रिसले पोइको काख … । बारामा यस्तै भएको छ, पारिवारिक विवादमा छिमेकीलाई फराउन एक महिलाले दुई वर्षीया बालिकालाई ‘बलात्कार’ गरेकी छन् । घटना बाराको माइगढीमाई–१, तेगछिया टोलको हो । बिहीबार दिउँसो दुई वर्षीया बालिका आकृति (नाम परिवर्तन) विक्षिप्त अवस्थामा छिमेकीको घर अगाडि भेटिएकी थिइन् । बालिका बलात्कृत भएको खबरले गाउँभर फैलियो ।
बालिकाको परिवार र छिमेकीबीच लामो समयदेखि विवाद थियो । बेलाबेला दुई छिमेकी सार्वजनिक रुपमा गाली गलौजमा उत्रन्थे, अरु बेला बोलचाल बन्द । आकृति बलात्कार भएको घटनालाई पनि दुई परिवारबीच रहेको विवादसँग जोडेर हेरे । बालिकाका आफन्तले पनि छिमेकीमाथि शंका गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारामा उजुरी दिए ।
‘बलात्कारीले यौनाङ्गमा कपडा किन कोच्यो भन्ने प्रश्न आयो र हामीले फरक कोणबाट अनुसन्धान थाल्यौं, अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारी भन्छन् । त्यसपछि प्रहरीले बालिकी ठूलीआमा ४० वर्षीया कलावती देवी गिरीसँग पनि सोधपुछ गर्यो, जसले छिमेकीलाई आरोपित गर्दै उजुरी दिएकी थिइन् । लामो केरकारमा उनले बोली फेरिरहिन् । प्रहरीले अब उनीमाथि नै शंका गर्न थाल्यो ।
शुक्रबार उनले आफैंले पीडित बालिकाको यौनाङ्गमा कपडा घुसारेको स्वीकारेकी छन् । आफ्नो छिमेकीसँग लामो विवाद रहेको र उनलाई फराउन बालिकालाई उठाएर यस्तो हतर्क गरेको उनले बयान दिएकी छन् । ‘हात बाँधेर कट्टु खोलिदिएँ मुखमा कपडा कोचे, यौनाङ्गमा पनि कपडाको टुक्रा कोचिदिएँ’, उनले बयान दिएकी छन्, ‘त्यसपछि छिमेकीको घरमा फ्यालेकी थिएँ ।’
मुलुकी अपराध संहिताले यस्तो हर्कतलाई पनि बलात्कार मान्छ । त्यसैले प्रहरीले जबरजस्तीकरणी र ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीमाथि अनुसन्धान थालेको छ । ‘जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप पनि भइसकेको छ’, बाराका प्रहरी प्रमुख एसपी सानुराम भट्टराईले भने, ‘अहिलेसम्म घटनामा कमलादेवीको मात्र संलग्नता देखिएको छ ।’घटनामा अन्य व्यक्तिको संलग्नता रहेको वा नरहेको भन्ने चाहिँ विस्तृत अनुसन्धानपछि नै खुल्ने भट्टराईले बताए । छिमेकी भने हिरासतमुक्त भएका छन् ।
* पर्याप्त नसुते मुटुरोगको यस्तो समस्या !